ကိုယ်ရွေးချယ်ရာ ဘ၀သာ….Choice!!!!!!!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုယ်ရွေးချယ်ရာ ဘ၀သာ….Choice!!!!!!!!
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jan 20, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 31 comments
ပီးခဲ့တဲ့အပါတ် ပိတ်ရက်က မရောက်တာကြာတဲ့ မင်္ဂလာဒုံက အမေတို့အိမ်အလည်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…အိမ်မှာ အမေနဲ့ ထိုင်စကားကောင်းနေတုန်း
ဘိုသီဘတ်သီနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကလေးငယ်ပေစုတ်စုတ်လေးတစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲလို့ ၀င်လာပါတယ်..ကလေးကပိန်ညှော်ညှော်..နှပ်တွဲလောင်းနဲ့
သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျုပ်ညီမငယ်ဖြစ်နေပါတယ်…အိုစာတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ အ၀တ်အစား နွမ်းဖတ်ဖတ်နဲ့…မြင်ရတာစိတ်မကောင်းစရာ..
ကျုပ်လည်းအမေတို့အိမ်သာရောက်ဖြစ်တာ…အိမ်ခွဲနေတဲ့ ညီ၊ ညီမတွေအိမ်တော့ မရောက်ဖြစ်ပါဘူး…အခုလိုအမေ့အိမ်လာရင်းတိုက်ဆိုင်မှသာတွေ့ဖြစ်ပါတယ်…
“ကောင်းပါတယ် အကို…စီးပွါးရေးကတော့…ဒီလိုပဲ လုံးချာလိုက်နေတာပဲလေ”
ခု..လေးယောက်ရှိပီနော်…အေး..တော်သင့်ပြီ..ဟ”လို့ ကရုနာဒေါသောနဲ့ ပြောလိုက်မိပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်..ကလေး လေးယောက်မှာ..အကြီးဆုံးက ခုမှ ရှစ်တန်း..အဲဒီတစ်ယောက်က ငယ်ငယ်ကတည်းက အမေတို့အိမ်ခေါ်ထားပြီး ကျောင်းထားပေးထားတာ…
ကျန်သုံးယောက်နဲ့တောင်…မလောက်မငနဲ့…တွေးရင်းနဲ့ စိတ်က အတိတ်ဆီကိုရောက်သွားပါတယ်..
ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်က အဖေက စစ်မှုထမ်း..ကလေးတွေကလည်းများတော့
တော်တော်ချို့တဲ့ခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ အဖေက အားလုံးကို မဖြစ်မနေကျောင်းထားပေးပြီး
၁၀တန်းနဲ့ ရပ်သွားသူတွေလည်းရှိတာပေါ့…ခုန ပြောခဲ့တဲ့ “အသိန်း” ဆိုတာက
အေးအေးသိန်း နဲ့ အေးအေးထွေး ဆိုတဲ့ အမွှာပူးမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ပါ…အသိန်းက ဘိုင်အိုနဲ့ ဘွဲ့ရပြီး အထွေးက အီကိုနဲ့ ကျောင်းပြီးပါတယ်
အသိန်းက တက္ကသိုလ်တက်နေကတည်းက ပဲတော်တော်များပြီး အထွေးကတော့
ယောက်ကျားဆန်ဆန် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပါ…ဘွဲ့ရပြီးဘာမှမကြာဘူး အသိန်းတစ်ယောက်
အဲဒီအချိန် ကျုပ်က အိမ်မှာမရှိတော့ပါဘူး..အလုပ်နဲ့ နယ်ရောက်နေပါတယ်…
ကောင်လေးက သူ့ထက်၅နှစ်လောက်ကြီးတယ်၊ ၈တန်းမအောင်ပဲကျောင်ထွက်ထားတာ
အင်း…အခုတော့ သူ့ယောက်ကျားက ၀ါယာလက်ထိပ်မှာ ကွမ်းယာဆိုင်ရောင်းတယ်…
အသိန်းကတော့ ယောက်ခမအိမ်မှာကလေးသုံးယောက် ထိန်းကျောင်းရင်း ယောက်ခမအိုကို ပြုစုပေါ့…
အထွေး ကျတော့ နိုင်ငံခြားကုမ်ပဏီ တစ်ခုမှာ အကောင်တဲန့်၊ ဒေါ်လာစား၊ အဆင်ကိုပြေလို့
ဒီအချိန်ကျမှတော့ မောင်နှမအရင်းတွေပေမဲ့ ကိုယ့်မိသားစုတာဝန်ကိုယ်ထမ်းကြလို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လည်း သာရေး၊ နာရေးကလွဲလို့ သိပ်ကြီးမဖေးမနိုင်ကြတော့…
ကျန်နေသေးတဲ့ အမေအိုနဲ့ အမေနဲ့အတူနေ အမ၊ ညီမအပျိုကြီးတွေကိုသာ
အော်…ဘ၀တွေ……ဘ၀တွေ..ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ဇတ်သွားအတိုင်း ကိုယ်ကနေကြရတာပါလား…..မိဘတွေက အခွင့်အရေးညီတူညီမျှပေးခဲ့ပါရက်နဲ့………
မုန့်ဖိုးထုတ်ပေးပြီး အမေနဲ့ စကားပြန်ဆက်နေလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒဂယ်ဒေါ့ ကိုယ်က ဘွကို ရွေးချယ်တာထက် ဘွကကိုယ့်ကို ရွေးချယ်တာသာ ခံဂျရတာများဗာဒယ် (၉၉.၉%) ဦးဂျီးမိုက်ရာ..။
စောစောစီးစီး ချမ်းချမ်းစီးစီးမှာ ကွန်မန့်လာပေးသွားတဲ့ ဆြာကြောင်ကိုသင့်ခရုပါဗျ
ရွေးရင်း ရွေးရင်း နဲ့ ဘ၀ မလှသူတွေ
ရွေးမိလိုက်လို့ ဘ၀ လှသွားသူတွေ
ထိုထို နှစ်ခုကြားမှာ ရွေးတာတော့ရွေးပါပေါ့
အရွေးမှား မရွေးမမှားထက် ဖြစ်တည်လာတဲ့ဘ၀ပေါ် အကောင်းဆုံးဆက်သင့်တာပါဘဲလေ။
ကို​ကြောင်​​ပြောသလို ​ရွေးခွင့်​မရှိတာလည်း အများသား..
ကိုယ့်ဘာသာ ပိုင်ပေရော့လို့ သဘောမထားပါနဲ့
မိသားစုတွင်းမှာ လှူခြင်းရယ်လို့ သဘောထားပါနော်…
အကူညီပေးပါလို့ ကိုမိုက် ညီမလေးကိုယ်စား တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်…
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ၊ ဘဝဆိုတာ တင်ကြိုပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပြီးသား ခင်ဗျ…
ဆင်ချင်ဉာဏ် သုံးနိုင်ပါမှ အဆင်းမကြမ်း ၊ အကျမနာအောင် ထိန်းနိုင်တာဗျို့…
တဖအေတမအေထဲမွေးတဲ့ တအူတုံဆင်းမောင်နှမချင်းတောင် ကံအကျိုးပေးကွာတော့ အတော်ကွာ တယ်နော်ဦးမိုက်ရေ။ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ဘ၀ဆိုတာထက် ဗုတ်ဓဘာသာပီပီပြောရရင်တော့ ရှေးဘ၀ကံတွေ လဲပါမယ်ထင်ပါ့။
TNAရေ…ကျုပ်သိသလောက်ကတော့ ကံ ဆိုတာထက်…စာမဖတ်တာဆိုးတာဗျ..
ကျောင်းစာကလွဲလို့ ဘာစာမှမဖတ်တော့ အတွေးအခေါ်တိမ်တယ်၊ ဘ၀မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတယ်
ဖြစ်လာတဲ့ဘ၀မှာလည်း မောင်တထမ်းမယ်တရွက်မကြိုးစားပဲ မျှောပစ်လိုက်တယ်…
အဲဒီရဲ့ ရလာဒ်ပါပဲ….ဒါကြောင့်ကျုပ်သားနဲ့သမီးကိုတော့ စာဖတ်တတ်အောင်သင်နေတယ်
အကြီးဆုံးဖြစ်ရတဲ့ဘဝ မျိုးကရော.. အူးမိုက်…
ကိုယ့်ဘဝကို မိသားစုက ပြဌာန်းပေးထားတဲ့ ဘဝမျိုးလေ..
ဓါတ်ပုံထဲက အမအကြီးဆုံးဆို ၁၀တန်းနှစ်တခါကျပြီးတာနဲ့ အလုပ်ခွင်ဝင်ပြီး
မိဘကိုတဖက်တလမ်းကူခဲ့ရတယ်…ညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုထောက်ထားပြီး တောက်လျှောက်လုပ်ကျွေးလာတာ..အိမ်ထောင်လည်းမပြုဖြစ်တော့ဘူး…သူတစ်ဖက်တလမ်းကလုပ်ကျွေးခဲ့လို့ ကြီးမိုက်စာဆက်သင်နိုင်ခဲ့တာပေါ့..ဒါကြောင့် အမေနဲ့နေနေတဲ့ ကျေးဇူးရှင်အမကြီးကို အမေလိုပဲ
အောင်မယ်လေး အူးမိုက်ရယ် အကြီးဖြစ်ပြီးအငယ်တွေအပေါ်ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်၊ သူအနိုင်ကျင့်သမျှ အငယ်ဆိုတော့ငုံခံ၊ သူဖွသမျှလိုက်ရှင်း သူလိုသမျှလိုက်ဖြည့်ရတဲ့ဘ၀တွေလဲရှိသေးပါတယ်လေ။ ကိုယ်လိုတော့သူ့ဆီကမရ။ သူလိုတော့ပေးရ ခံရခက်ပါဘိ ဦးမိုက်ရယ်။
ရှိတာပေါ့ မွသဲရယ်…လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေမဟုတ်လား
အငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့ ဒီနေ့ထက်ထိ သူတိုတောင်းသမျှ သူတို့မခြေမငံပြောသမျှလိုက်ပေးနေ၇တယ်
ကောင်းကင်ပြာကြားဖူးတာတော့ ဘ၀ဆိုတာ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသား စာတစ်အုပ်လိုပဲ….။ ဘယ်စာမျက်နှာ ရောက်ရင် ဘယ်လိုဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပြီးသားတဲ့…..။ ဒါဟာ အတိတ်ကံကို လက်ခံတာလား…။ ကောင်းကင်ပြာတော့ လုံးဝ သဘောမတူပါ…။ လူတိုင်း အတိတ်ကံပါသည်ဆိုတောင် ရာခိုင်နှုန်းနည်းမှာပါ….။ လူတိုင်းက ဘ၀ဆက်လိုက်တိုင်း အတိတ်ကံကိုချည်းလက်ခံနေရမှာလား….။
ကိုကြီးမိုက်ပြောသလို စာများများဖတ်ပေးသင့်ပါတယ်….။ ဒါပေမယ့် Too much knowledge make fool. အိမ်နားက အပျိကြီးမမဆို ရည်းစားတွေများပြီး ယောကျာ်းတွေအကြောင်းသိသွားလို့ ယောကျာင်္းမယူချင်တော့ဘူးတဲ့….။ ဘာတွေများ အသိလွန်သွားလဲတော့ မသိ!!!!
တော်ကြာနေ.. ယူအက်စ်က ကွမ်းယာဆိုင်ဖရန်ချိုင်းစ်မှာ.. အင်ဗက်စ်(ငွေရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု) ထလုပ်မှ… အိုကေစိုပြေနေပါဦးမယ်..။
ယောကျာ်း.. မိန်းမ… အ်ိမ်ထောင်ဖက်… လူရောပေါ့လေ..။
ကိုယ့်နှမတစ်ယောက်အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာနဲ့ ဖြစ်လာရတဲ့အခြေအနေအပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကို ခံစားမိပါတယ်။
ဒီရွာထဲက လူငယ်တွေ ရေးတာမန့်တာ ဖတ်မိရသလောက်တော့ ခံယူချက်မြင့်မားကြသူလို့ ခန့်မှန်းလို့ ရတာမို့ ကျေနပ်အားရစရာပါပဲ။
ဘဝဆိုတာ ပြဌာန်းပြီးသားလို့ ဆိုကြပေမင့်
ဉာဏ် နဲ့ ဝီရိယပေါ်မူတည်ပြီးတော့
အမွှာဆိုတဲ့ မွေးနေ့ချင်းတူတာတောင်မှ ပစ္စုပ္ပန် အလုပ်တွေ မတူတော့ အကျိုးပေးကွာသွားတယ်နော်။
ရိုးသားမှု ဆိုတဲ့ ရှောင်သီလ နဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလုပ်အကြွေးပြုမှုဆိုတဲ့ ဆောင်သီလ တွေကို လုံအောင်ထိန်းရမယ်ဆိုတဲ့ ဉာဏ်ရှိရင်
သင့်တင့်အောင် ရလာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မဖတ်ရတာကြာတဲ့ ဦးမိုက်လက်ရာလေး ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးပါ။
အတိတ်တွေဘာတွေကြောင့်ကိုမဟုတ်ဘူး…လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် ဘ၀မှာ ကို
စာပေဗဟုသုတ လေ့လာလိုက်စားမှုမရှိ..အဲဒီတော့ အတွေးအခေါ်ညံ့၊
ပြီးတော့..ဇနကကံ၊ ဥပတ္ထမ္ဘကကံ၊ ဥပပီဠကကံ၊ဥပဃာတကကံ..
ပြီးတော့.. ဂရုကကံ၊ အာသန္နကံ၊ အာစိဏ္ဏကံ၊ ကဋတ္တာကံ..
.. ပြောချင်တာက.. ပါမြူတေးရှင်း..ကွန်ဘိုင်နေးရှင်း.. ဖက်တိုရီရယ်တွေနားမလည်…. သင်္ချာမတတ်..မသိကြသေးတဲ့ခေတ်မှာ.. ဖြစ်နိုင်ခြေကို အတိအကျမသိ..မတွက်နိုင်ဘူး..ဆိုတာပါပဲ..။ သာမန်အားဖြင့်.. မြန်မာတွေနေ့စဉ်ဘ၀မှာ… သုံးနေတဲ့ အတိတ်ကံဆိုတာကြီးဟာ.. အလုပ်တခုလုပ်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ ၁ရာနှုန်းတောင်မရှိလောက်ပါ..။ သိပ္ပံစကားနဲ့.. စာရင်းထဲထည့်မတွက်သင့်လောက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ကြောင်း..။
ဦးမိုက် ရေ…ဦးမိုက် ညီမငယ်လေး ဒီထက် ပို အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင် ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ် ။
ကျွန်တော် ကတော့ ဒီနေ့ လူငယ်တွေတော်တော် များများ ပြောပြော နေတဲ့ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေး ဆို တာကို အတိတ် ကံနဲ့ ညဏ် နဲ့ ကိုယ်တိုင် လုံ့လ စိုက်ပြီး ရောသမ မွှေ ရမယ် လို့လေးလေး နက်နက် လက်ခံထားတယ် ။
ဘ၀ဆိုတာ ကျောက်တုံးကြီးတဲ့ဗျ… ကွကိုယ်ထုဆစ်တန်ဖိုးမြှင့်ရတာတဲ့ …….မထုဆစ်ပဲပစ်ထားတဲ့လူတွေလဲရှိသတဲ့…ထုဆစ်ပြီး ပုံမပေါ်တဲ့လူတွေလဲရှိတယ်တဲ့ ….ထုဆစ်ပုံဖော်ပြီး တန်ဖိုးအလွန်မြင့်သွားတဲ့လူတွေက လက်တဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ …
အမှန်ပဲ ကိုဆောရိုးရေ..ကွကိုယ်ထုဆစ်တန်ဖိုးမြှင့်တတ်ဖို့ ပညာနဲ့မဆုတ်မနစ်တဲ့ဝိရိယတော့လိုသပေါ့ဗျာ…..
ကရုတစိုက်ဖတ်ပြီး အဖိုးတန်ကွန်မန့်လေးချီးမြှင့်တဲ့ ကိုမောင်ကိုလည်းကျေးဇူးပါဗျ
ဘဝက ပေးသလောက်ကို ကိုယ့် ညာဏ် နဲ့ စဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်ရတာပဲ။
ကိုယ့် အကျိုးပေးဟာ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု ရယ် ကိုယ့် စိတ်ထားရယ်၊ ကိုယ့် နဂို ကံ ရယ် ဆိုင်သလားပဲ။
မြင်နေကျကွန်မန့်တွေ မမြင်ရတော့ ဟာနေသလိုမို့ပါ…
ကျနော်က မနက်နိုး ဖတ်၊ ညမအိပ်ခင်ဖတ် တာ ၂ ကြိမ်။
နေ့လည်ခင်းမှ မန့်တာဆိုတော့ မအားတော့ မရောက်တော့ဘူးးးး
စိတ်အပူနဲ့ ရွာကနေဘယ်မှ အသွားဘူးးးး
တစ်ယောက်က လူများစု လိုပဲ ဖြစ်သွားပြီး
ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ လူနည်းစုထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါပဲ ကိုမိုက်ရေ..။